ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဗီဒီယိုချက်တင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့!
သငျသညျမလုပ်ခဲ့လိုလျှင်လက်ခံရရှိအီးမေးလ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို၊အကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအဖြစ်ရာထူးသင်စေခြင်းငှါသို့မဟုတ်ရှိစေခြင်းငှါသိမ်းပိုက်။ မမေ့မလြော့ပါသတ်မှတ်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုသွားဖို့ဆိုက်ကြည့်ရှုများအတွက်အမည်မသိလူနှင့်ပေးမ နှင့်စကားဝှက်။ သို့သော်စိတ်ကိုထား၊သင်မြင်အမျိုးမျိုး၊အပူမိန်းကလေးများနှင့်ပင်အဘယ်သို့ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ပုံ။ အဘယ်သူသည်ပထမဦးဆုံးဒီစကားပြောရှိပါတယ်၊မိန္းကေလး၊အရာအားလုံးဒဏ်ငွေနှင့်မသိရပါဘူးအဘယ်သို့သောအမြန်နှုန်းနှင့်မည်သို့ကြ...
တစ်အသိုင်းအဟာသကပါရဘယ်သူမက်ဆေ့ခ်ျများရှိနေဆဲပိုပြီးအသုံးပြုသူများ၏ဖန်တီးပါပြီ။ ငါလိုထပ်မံ၏ပုံအဟောင်းတဦးတည်းကိုအဘယ်မှာရောက်ဖြစ်တာခွေးများအတွက်၊သို့သော်-အကျွန်ုပ်နှင့်အတူတက်လာပိုကောင်းတစ်ခုခု:တွေ့မြင်လျှင်ဤ၊ငါဖြစ်နိုင်ပြီးသားကန်ဘောမှလွှင့်တင်ပြီးရွေးချယ်ကင္မရာ၊ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်နားထောင်။ သင်ပန္ေကြည့်ရှုရယ်စရာ၊ဆေ့၊သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလိုက်တော့၊မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှု၊ရာနဲ့ စိတ်အခြေအထပို။ ၁ နှစ်အရွယ်မဟုတ်လိမ့်မည်ဘယ်လောက်နားလည်ကြီးခဲ့သောအခါအထင်သေးသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည်မှာနိုင်ငံရေးအယူအပေါက်ကြသည်ရပ်က...
ထိုမြေပုံသည်လက်တွေ့ကျတဲ့ကိရိယာကိုအသုံးပြုသူ၏၊အတူအရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်အခြေခံပညာစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ရန်အတြင္းချက်တင်စာမျက်နှာများတွင်။ ဂီတအတွက်အားလုံးအမျိုးအသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း။ နားထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လယ်ဓားပြဒီယိုများ၊အကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များသည်အာမခံချက်။ ဖော်ပြအချက်အလက်အသုံးပြုသူများနှင့်ပတ်သက်၊ဟာသ၊မကြာသေးမီဖိုရမ်အကြောင်းအရာရှိတယ်၊နှင့်စာရင်းဇယားထံမှ။ ဒီနေရာမှာသင်ဆက်သွယ်နိုင်အချက်တင်ကနေတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပုံစံ။ကျနော်တို့မျှော်လင့်တိကျတဲ့တောင်းဆိုမှုများနှင့်အကြ...
၁။ အရေအတွက်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများအပေါ်ဆိုဒ်အများအပြားသန်း။ သူတို့တွင်သာအိမ်တွင်နေထိုင်လူတွေက ၊အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားမြို့ကြီးများ၏ရုရှားနှင့်ပြည်ပမှာ၊အဘယ်သူသည်စိတ်ရင်းမှန်ချင်မှလူသစ်ဖြည့်ဆည်း။ ၂။ လက်တွေ့ကျတဲ့အဖော်ရှာစနစ်အပေါ်အခြေခံပြီးအရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ချက်များ၊ကဲ့သို့:ပြင်ပဒေတာ၊ဇာတ်ကောင်စရိုက်များ၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တည်းဖြတ်၊ပညာေရးအဆင့်၊ဝါသနာ၊စသည်တို့ကို။ င်း၏နှင့်အတူကိုကူညီ၊သငျသညျအတှေ့ဖို့သေချာတဲ့သဘောဖော်၊မိတ်ဆွေ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်...
စကားပြောထောက်ပံ့ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်သွယ်မည်ဝှက်ဖြင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအပေါ်နှင့်ဝဘ်။ ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအောင်မြင်သည်သုံးတဲ့အထူးစီစစ္ျယန္တရား:လက်လှမ်းချက်တင်ရရှိနိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ၊အလျှင်၊သငျသညျမတော်တဆဝင်အလယ်၊အတုနှင့်နံပါတ်များအတွက်။ စကားပြောပေးအခွင့်အလမ်းများအတွက်အမည်မသိဆက်သွယ်ရေးကနေမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ဝဘ်။ ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအောင်မြင်သည်သုံးတဲ့အထူးစီစစ္ျယန္တရား:ဝင်ရောက်ရန်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ၊သင်ရိုက်ထည့်တဲ့လယ်ပြင်အဘို့အ၊အအမည်ပြောင်နှ...
ငါ့နာမသည်ဒါဝိဒ်၊ငါ ၃၉ အသက်အနှစ်၊ငါဗ်မြို့မှသူများတည်း၊ငါသည်ငါ့ကုမ္ပဏီ၏လယ်ပြင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု-၃၃ နှစ်အရွယ်တိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၁၇၁ နှစ်အရွယ်ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကတယ္။၊ ငါ၏စုံတွဲတစ်တွဲကီလို၊ရုန်းကန်။ မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ရတဲ့၏ဝယ်ယူကြသည်မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်မျှော်လင့်ချက်အစည်းအဝေး၏၄၀-၅၂ အသက်အနှစ်၊ကောင်း၏၊ကောင်း၏၊ယုံကြည်သောဘုရားသခင်၌ရွှင်လန်းသော၊တာဝန်ရှိသော၊အဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်၊လွတ်လပ်သော၊ငါခဲတဲ့ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ကျွန်မမဆုံးရှုံးပါဘူးမျှော်လင့်ချက်အတွက်အစည်းအဝေးတစ်ခုနှင့်အတူတစ်ဦးကို...
ထိ ၊နီးပါးအတွက်စက်တင်ဘာလမှပြောင်းရွှေ့ ။ ဘတ်။ ငါလိုလူကိုရှာဖွေဖို့ပြောဖို့ပထမဦးဆုံး၊ပြီးတော့အလုပ်သင်ချင်သမျှကို။ ၁၉ နှစ်အရွယ်မိန်းမငယ်။ ငါ၏အသွင်အပြင်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်မြင့်-၁။၆၈-၁။၇၀၊တိုတောင်းသောဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်၊အခါအားလျော်ပြန်လာပြီး ၂၀၀၇-အိုး။ ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်လူအလိုအလျောက်၊မကြောက်ခြင်း၊မျက်နှာအင်္ဂါများမှာကဲ့သို့သာယာသောအတွက်ရှာ၏ နှင့်စာတတ်ေြမာက်မှု၏အ ။ -။ ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ငါသည်ခုနစ်။ ခုနစ်။ ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့်ဒါရိုက်တာရှေးခယျြနိုငျကြောင်းငါကောင်းစွာပညာ...
မှကြွလာသောအခါဤသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်လူတစ်ဦး၊အကောက်ခွန်၏ သည်အစဉ်အမြဲဖြတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူ:"သင်သိလျှင်၊သင်တို့သိသူရဲ့အထီးကျန်ဆန်။အားလုံးရဲ့ကောင်းကောင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့လိုအပ်ရာတစ်ခုခုပိုတိကျတဲ့၊စင်ကြယ်သောလုိက္တယ္။"ထို့ကြောင့်၊ကျနော်တို့များအတွက်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနိုင်ငံများနှင့်မိတ်ဖက်၊အမေးပေးစေခြင်းငှါအန္တရာယ်အရိပ်အမြွက် အပေါ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူအဖီး။ လျှင်ရှစ်ပါးသောဤအ၊သင်သေချာပါစေ၊သူတို့မှန်ကန်သောသို့မဟုတ်မှန်ကန...
အဘယ်ကြောင့်ငါမြင်ရဤစာမျက်နှာကို? ဤစာမျက်နှာကိုခဲ့သည်အလျှောက်ဖန်တီး။ အထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်တစ်ခုချင်းစီသစ်ကိုဒိုမိန်းနဲ့ပြသကြောင်းအသစ်တွေကိုဒိုမိန်းအရာက္တဲ့ေ။ ဒီမပါဘဲပညာ၊ဧည့်လက်ခံရရှိမယ်လို့အမှားမည္။ အဖြစ်ဖောက်သည်အမေရိကန်-ဒိုမိန်း၊သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဤဒိုမိန်းအတွက်အသင့်ရဲ့ဒိုမိန်းအစုစုအချိန်တွင်မဆိုအွန်လိုင်း(ဥပမာ၊ဝဘ်ညႊန္၊အီးေမးလ္ခ်ိန္ၫ၊ဝဘ်အာစာအုပ္၊)။ ဤစာမျက်နှာကိုခဲ့သည်အလျှောက်ဖန်တီး။ အထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်တစ်ခုချင်းစီသစ်ကိုဒိုမိန်းနဲ့ပြသကြောင်းအသစ်တွေကိုဒိုမိန်းအရာက္တဲ့ေ။ ဒီမပါဘဲပ...
ငါသည်အသက်ရှင်သောအခုဂျာမနီမှာဒီနေရာကိုလာပြီးအနှစ်၊အောင်ကြိုးစားနေအကျွမ်းနှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်မရှိ။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်သေးငယ်တဲ့မြို့အခါသင်ဖြတ်လျှောက်လမ်း၏အထင်တော့တာ္(နှင့်အဘိုးအဘွား)။ သွားအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ခလုတ်လည်းရှိပါတယ်အဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်သင်ယူဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊ငါလုပ်သော်လည်း၊ဘမ်းချို့အားဖြင့်ရှုံ့။ ရှိပြီးသားအတွေ့အကြုံ၊ဒါပေမယ့်ငါ ၊အချို့တို့သည်အမည်မဲ့သို့မဟုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ငွေမပါဘဲ။ အကြံပေး၊အဘယ်သူသည်အသက်တာအတွက်ဂျာမ။ ငါသည်အသက်ရှင်သောအခုဂျာမနီမှာဒီနေရာကိုလာပြီးအန...
မီယံကြော်ငြာများပြသနေသောအတွင်းပေးဆောင်ကာလကာလအတွက်အထူးလုပ်ကွက်၏စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကို၊တိုင်းခန်း၊နှင့်အဓိကအစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြော်ငြာ။ သွားသင့်အကောင့်မှ၊အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ"အပိုဆောင်းန်ဆောင်မှု"(၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းအပေါ်အနူး)။ ရွေးကြော်ငြာချင်ယံနှိပ်ပါအပိုဆောင်းန်ဆောင်မှု၊နှင့်ထိုအခါ၌-'အောင်ယံ'-အဆိုပါဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်စာမျက်နှာနှင့်အတူရွေးချယ်စရာ၏ငွေပေးချေမှုစနစ်။ ရွေးအဆင်ပြေတဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်နှင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအဘို့အငွေပေးချေ။ ငွေပေးချေမှုပြီးနောက်၊သင်သည်သင်၏ကြော်ငြာကြလိမ့်မ...
ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လာျ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲတားမြစ်ထားသည်။ အားလုံးလှုပ်ရှားမှုများဖို့ဘာသာရပ်များမှာစောင့်ကြည့်။ ဤစာမျက်နှာကိုမဆံ့မပါဘူးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံအစည်းအဝေး။ ယခုပိတ်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်နှိပ်ပါအမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည့်အလင့်ထားသည်သင့်ရဲ့အဖွဲ့စေလွှတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်။ ဒီလမ်းညွှန်ချက်ကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြဖို့ဘယ်လိုများအတွက်မှတ်ပုံတင်လာျ။။။။။ သင်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းအတွက်အသုံးပြုသင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝ...
ကိုယ်ဝန်များ၊သင်ျ၊အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၊လူမှုနိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ရန္။ ဒါဟာပိုပြီးအရေးကြီးသည့်အခါဆွေးနွေးလူထုအတွက်-နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ရှုထောင့်။ ကောင်းမည္ဟုပေးသည်အတိုင်းအမျိုးသမီးအသံတစ်သံ-ကောင်းအာင့္၊ေမာ၊ဆိုလိုသည်'မိန်းမ'။ ထိုအမည်ကြောင့်ရှင်းလင်းခဲ့သူကိုဒီမှာဆို။ ကိုယ်ဝန်များ၊သင်ျ၊အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၊လူမှုနိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ရန္။ ဒါဟာပိုပြီးအရေးကြီးသည့်အခါဆွေးနွေးလူထုအတွက်-နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ရှုထောင့်။ ကောင်းမည္ဟုပေးသည်အတိုင်းအမျိုးသမီးအသံတစ်သံ-ကောင်းအာင့္၊ေမာ၊ဆိ...
ဟေး၊သင့်အရုပ်၊တစ်စင်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အငယ်တစ်ဦးသည်လူ။ ဒါကြောင့်ရာင္စပ္ေ"၊ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ယောက်ျားလေးများအတွက်တိကျတဲ့အစည်းအဝေး၊ဒါပေမယ့်ငါကအကောင်းဆုံးပညာရေး၊ဒါကြောင့်မိန်းကလေးကဲ့သို့ရေးသားဖို့ငါ့ကိုအဖို့မှာအသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်။ အလုပ်ပြီးနောက်၊မကြာခဏပန်း(အောင်လျှင်ထို့နောက်သာတနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်ကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ကိုချွတ်ယူ၊အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးသင်တန်းလည်းမောင်းတယ်။ (အထူးသဖြင့်အပိုင်းရတဲ့အာဏာ၏ရှေ့နေထံမှအီးမေးလ်လိပ်စာပိုင်ရှင်က)အားဖ...
တစ်သန်းနီးပါးလူတိုက်ရိုက်ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင်သူတို့ထဲကအများစုဟာအိမ်နီးချင်း။ သင်ထင်စေခြင်းငှါအမာန်တည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြ။ သန်းပေါင်းများစွာသူတို့နေဆဲအထီးကျန်။ လျှင်ပင်ဆွေမျိုးသားချင်းနှင့်မိတ်ဆွေများကိုတင်ပြခံစားခဲ့ရထီးကျန်နှစ်အဘို့၊နေ့တိုင်းအသက်တာနိုင်တော့သူတို့ကိုထောက်ပံ့။ ကျွန်မဖခင်နေထိုင်ခဲ့၊နောက်ဆုံးမှာသူကသွားသို့အသီးအရွက်များ။ သူမြင်မှဖာ၊အိပ်ပျော်ကြ၏။ သူမရှိသလောက်မြင်။ မရှိသလောက်ခဲ့သူအခြားလူတို့အားပြောဆိုရန်သူနိုင်ခဲလှ၏စကားပြောဖို့အခြားမည်သူမဆို။ သူ၏အထီးကျန်ပြည့်စုံခဲ့၊သူသည်ဖျက်သိမ်းအ...
သာပထမတစ်ချက်မှာပုံရတဲ့လူတွေကမပြောင်းဘူး။ ဟုတ်ကဲ့၊မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ထဲက၏အမြင်ဒဿနပညာရှင်၊သင်မြင်သောငါတို့သည်နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ကြောင်းအတူတူပြဿနာများနှင့်၊ကျနော်တို့အတူတူပင်အမှား၊ကျနော်တို့ဖြစ်ကြသည်၊တကယ်တော့၊ညီသောအရာကိုရှာနေ-ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပ၊နှင့်နွေးထွေးနှစ်သိမ့်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုအပ်ပါတယ်၊တစ်ဦးကောင်းအလုပ်အိမ်မှာ-တစ်ဦးအပြည့်အဝကြီးမား၊စုစည်းခွက်နှင့်ကျန်းမာသောမိသားစု။ ကောင်းပြီ၊ဒါဟာအရေးကွီး၏တန်ဖိုးစနစ်၊အဝင်အမှန်တကယ်ချစ်တဦးတည်းနှင့်အစွမ်းကိုအဘယ်သို့ပြု၊ခ...
ငါဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူကစားတဲ့အပေါ်ကျွန်မ သို့မဟုတ်အိုင်ပက်ဒ်။ အဘယ်သူမျှမ၊အဲဒီကိရိယာမရှိဘူးဗီဒီယိုပါ။ ထားခဲ့သင့်မေးခွန်းများအတွက်မှတ်ချက်များအပိုင်း။ တုံ့ပြန်မှုပေါင်းစည်းလိမ့်မည်။ ချင်သောသူတို့အဘို့ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္မိမိတို့အဗီဒီယို။ အကယ္ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ထို့နောက်: )ကြိုးစား စာမျက်နှာမပါဘဲကျွန်းစုသုံးပးႏုိင္ပါတယ္။ ) စာမျက်နှာမပါဘဲအခါႏွဘဲအကူအညီကြိုးစား၊ပိတ်ပွဲအရာက္ဇာ(တစ်ခုလုံးကိုအက္ပ္ကိုမချက်တင်စာမျက်နှာ)၊အဖွင့်၊နှင့် ကိုချက်တင်စာမျက်နှာ။ )ဆိုရင်ပြန်လည်အရာက္ဇာပြ...
နှင့်ယခုအဘို့အပျော်စရာအစိတ်အပိုင်း။ ကျနော်တို့ဖွင့်။ နှင့်၊သင်သိသည့်အတိုင်း၊လုပ်ရပ်ပြတ်ပြတ်နှင့်တင်းကြပ်စွာအဆိုအရအဆိုပါအစီအစဉ်။ အားလုံးသုံးသူတို့၏နေအိမ်နှင့်အတူသူတို့အကြိုက်ဆုံးမစ္ကီေမာက္စ္တီရွပ္။ ရဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်၊လက်နက်ကိုအသွားဘယ်တော့မှဆုံးရှုံး။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ထိုအခါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မစ်ရှင်၏အပိုင်းအစ၊ငါကယူ။၊အထုပ်ပိုး။ အရပ်ရှည်ရှည်အနက်ရောင်ဆံရှင်နှင့်အတူတစ်ဦးအဖုံးကျန်းမာသောဆံပင်ရွှေရောင်နှင့်အတူတစ်စောင်ကိုနားလည်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များပင်မှာညလုံးမ်ား။ သူတို့ကိုအောင်နိုင်အောင်...
ပုံသေထိအမှတ်အသား။ ဒီအထူးတည်နေရာအပေါ်ဘော့နှင့်အလိုအလျောက်ပေးပို့ကြောင်းကိုအချက်အလက်အရေအပူချိန်ကို။ သူတို့အများဆုံးတိကျမှန်ကန်နှင့်အစဥ္။ အပူချိန်အိုးတံဆိပ်အပေါ်အလေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံကိရိယာများတပ်ဆင်ထားပါသည်ပေါ်အပျော်အပါးယာဥ္မ်ား၊နှင့်လမ်းအပေါ်၊ဤစစ်ဆေးရေးထွက်ယူသွားတတ်မှာအတိအကျအရေအပူချိန်တိုင်းမီတာ ၅၀၀။ နေစဉ်သင်္ဘောသည်စာရေးကိရိယာများ၊အချက်အလက်လက်ခံရရှိတိုင်း ၂ နာရီ။ သင်နှိပ်တဲ့အခါထိုမြေပုံပေါ်တွင်တံဆိပ်၊ကားဖုန်းများပြသထားသည်အားလုံးနှင့်အတူရေကိုအပူချိန်တိုင်းတာချက်များ။ သင်နှိပ်တဲ့...
ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့မရှိပါ ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ မိန်းကလေးများအဘို့အချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုဓါတ္ပံုမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကြော်ငြာအမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံ ငါလိုအ ကျပန်းချက်တင် ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အခမဲ့ ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း အွန်လိုင်းချက်တင် ဒေါင်းလုပ်ချက်တင်ကစားတဲ့